अर्थतन्त्र Archives - Page 104 of 157 - Purbeli News
सुनको भाउ एकै दिन पाँच सय रुपैयाँले बढ्यो , कती छ अाजकाे मुल्य ?
काठमाडौं । बजारमा आज (विहीबार) सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा पाँच सय रुपैयाँले बढेको छ । आज सुन प्रतितोला ५५ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ । हिजो (बुधबार) सुन प्रतितोला ५५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १५ रुपैयाँ बढेको छ । आज चाँदी प्रतितोला सात सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले...
पशुपति पेन्ट्सद्वारा ‘महा पर्वको रङ्गोत्सव रिटर्न्स’ को घोषणा
पशुपति पेन्ट्सले ‘महा पर्वको रङ्गोत्सव रिटर्न्स’ योजनाको घोषणा गरेको छ । कम्पनीले नजिकिँदै गरेको महान् पर्व दशैँ र तिहार लक्षित गर्दै ‘महा पर्वको रङ्गोत्सव रिटर्न्स’ योजनाको घोषणा गरेको हो । उक्त योजना भाद्र १ देखि कार्तिक ३० गते सम्म लागु हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ‘महा पर्वको रङ्गोत्सव रिटर्न्स’ योजनामा सहभागी हुन उपभोक्ताले कम्तिमा रु....
अाज यस्ताे छ सुनचाँदीको मूल्य
काठमाडौं, साउन ३२ / नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य यथावत छ । आज सुन प्रतितोला ५५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो मात्रै सुन तोलामा चार सय रुपैयाँले घटेर ५५ हजार रुपैयाँ कायम भएको थियो । आज चाँदीको मूल्य भने तोलामा पाँच रुपैयाँ घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला सात सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, ३१ साउन । धितोपत्र बजार आज दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । बाढी पहिरोका कारण मुलुक प्रभावित भएपछि बजार पनि प्रभावित भएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार १६० कम्पनीको १६ लाख १५ हजार ७३८ कित्ता शेयर रु ७८ करोड ३६ लाख सात हजार ४०८ मा किनबेच भएको छ । बजार १२.९७ अंकले ओरालो लागेर एक हजार ६२९.१६ अंकमा आइपुगेको छ । आज होटल समूहबाहेक अरु सबै ...
बाबियाचौर (म्याग्दी), ३० साउन । केही दिनदेखिको अविरल वर्षासँगैको पहिरोका कारण म्याग्दीका चारवटा लघुजलविद्युत् परियोजना बन्द भएका छन् । दुर्गम ग्रामीण बस्तीमा विद्युत् सेवा पु¥याउँदै आएका परियोजना बन्द हुँदा धौलागिरि र मालिका गाउँपालिकाका एक हजार ५०० घरधुरी प्रभावित भएका छन् । पहिरोले बाटो र बाढीले झोलुङ्गे पुल बगाएपछि दुई गाउँ जोड्ने पैदलमार्गसमेत ...
अाज कती छ सुनकाे भाउ ?
काठमाण्डाै । आज सुन एकै दिन थप पाँच सय रुपैयाँले महंगिएको छ । हिजो मात्रै तोलामा पाँच सय रुपैयाँले वृद्धि भएको सुनको मूल्य आज थप पाँच सय रुपैयाँले बढेको हो । आज सुन प्रतितोला ५५ हजार ४ सय पुगेको छ । विहीबार सुन ५४ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । दई दिनमा सुन एक हजार रुपैयाँले महंगिएको छ । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा पाँच रुपैयाँ ...
नेपाल हाइड्रो डेभलपरको साधारण सेयर आउँदै
काठमाडौँ, २६ साउन । नेपाल हाइड्रो डेभलपरले शुक्रबारदेखि तीन लाख ९० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार रु एक सय अंकित मूल्यका रु तीन करोड ९० लाख मूल्य बराबरको सेयर निष्काशन गर्न लागिएको हो । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल छ । कम्पनीका प्रमुख एवम् ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले साधारण से...